ခင်လေးငယ် : ဧရာဝတီရဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
ဧရာဝတီရဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
( Day - 1 )
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်ခဲ့တဲ့ နေ့လေးတွေကို တမ်းတလွမ်းဆွတ် နေမိပါတယ်....!! အဲ့ဒီနေ့က ဧရာဝတီရဲ့ကောင်းကင်မှာ တစ်နေကုန် တိမ်တိုက်တွေဖုံးပြီး မိုးတွေက မပြိုပါပဲ အုံ့နေခဲ့တာလေ~ နေလုံးကြီးကို မမြင်လိုက်ရဘဲ အမှောင်တွေ ကြီးစိုးသွားမှာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကင်မရာကို ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ဆုတွေတောင်းလိုက်ရတာ~ ကျွန်မ ဆုတောင်းလေး ပြည့်ခဲ့ပါတယ်... နေဝင်ချိန်အရောက် တိမ်တွေ ခပ်ကျဲကျဲ ဖြစ်သွားချိန်မှာ ရိုက်ယူခဲ့တဲ့ ပုံလေးကို ခံစားကြည့်ပေးပါ...။
( Day -2)
အပေါ်က ပုံလေးကလည်း ကျွန်မ အင်မတန်ချစ်တဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဧရာဝတီပါပဲ... သူ့ ရင်ခွင်စီးကြောင်း နံရံမှာ မေးတင်ရင်း အိပ်တန်းတက်ဖို့ နေဝင်ချိန်လေးကို စောင့်နေတဲ့ လှေငယ်လေးတွေပေါ့....။ ကင်မရာက အလင်းရောင်ကြောင့် သူတို့လေးတွေ အနှောက်အယှက် ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်စွာနဲ့ တိုးတိုးလေး ရင်ခုန်ရင်း ကျွန်မလက်ဖျားတွေ အေးစက်နေခဲ့တယ်~ မင်းတို့လေးတွေ လန့်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်..။
( Day -3)
အဲ့ဒီညနေရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာတော့ ဧရာဝတီကို မိုးထားတဲ့ တိမ်လေးတွေက ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ တောက်ပလို့ နေခဲ့ရဲ့~ နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် တိမ်လေးတွေ လှခဲ့တာလား.. ဒါမှမဟုတ်... တိမ်လေးတွေကြောင့် နေမင်းကြီးရဲ့ အဖိုးတန်မှုကို လောကကြီးက ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ် သွားတာမျိုးများလား...!! ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ~ နေမင်းကြီးရယ် တိမ်လေးတွေရယ်~ ကို ကျေးဇူးတင်ရင်း သူတို့ရဲ့ တောက်ပမှုတွေ အားလုံးအတွက် ကျွန်မ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဦးညွှတ်ခဲ့ပါတယ်..:)
Posted by Khin Lay Ngel at 5/01/2012 11:05:00 PM
နေမင်းကြီးရဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် တိမ်တွေလှတာ :)
~ မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် စကားစမြည်~
~ ငှက်တစ်ကောင် ~
~ တစ်ပွင့်တည်း ~
ချစ်ပါ.. ချစ်တတ်ပါစေ.. ချစ်ပါသည်။